जान्नुहोस आज बढ्यो कि घट्यो विदेशी मुद्राको भाउ ? हेर्नुहोस् कुन देशको कति पुग्यो – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /News/जान्नुहोस आज बढ्यो कि घट्यो विदेशी मुद्राको भाउ ? हेर्नुहोस् कुन देशको कति पुग्यो
जान्नुहोस आज बढ्यो कि घट्यो विदेशी मुद्राको भाउ ? हेर्नुहोस् कुन देशको कति पुग्यो
काठमाडौँ । जेष्ठ ११ गते आज अमेरिकी डलरसहित धेरै देशको विनिमयदर स्थिर रहेको छ । शनिबार अमेरिकी डलरसहित धेरै देशको विनिमयदर बढे पनि आज भने स्थिर रहेको नेपाल राष्ट्रबैकंले जनाएको छ ।
आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १२१ रुपैयाँ २३ पैसा तथा बिक्रिदर १२१ रुपैयाँ ८३ पैसा पुगेको छ। त्यस्तै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १४७ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रिदर १ सय ४८ रुपैयाँ ४७ पैसा रहेको छ। यूरोपियन यूरो एकको खरिददर १३२ रुपैयाँ २५ पैसा तथा बिक्रिदर १ सय ३२ रुपैयाँ ९० पैसा रहेको छ।
कतारी रियाल एकको खरिददर ३३ रुपैयाँ ९ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३३ रुपैयाँ २५ रहेको छ। साउदी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ २८ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ४४ पैसा रहेको छ। मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ७९ पैसा तथा बिक्रिदर २७ रुपैयाँ ९३ पैसा रहेको छ।
युएई दिराम एकको खरिददर ३३ रुपैयाँ छ भने बिक्रिदर ३३ रुपैयाँ १७ पैसा रहेको छ। बहराईन दिनार एकको खरिददर ३२१ रुपैयाँ ९ पैसा तथा बिक्रिदर ३२२ रुपैयाँ ६८ पैसा रहेको छ। कुवेती दिनार एकको खरिददर ३९२ रुपैयाँ ३२ पैसा तथा बिक्रिदर ३९४ रुपैयाँ २७ पैसा रहेको छ।
१९१ यात्रु बोकेको एयर ईण्डियाको विमान दुर्घ,टना
भारतमा कोरोनाबाट एकैदिन ५९ जनाको मृत्यु, संक्रमित संख्या २४ हजार नाघ्यो